Masinina misy ranomandry flakes - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Masinina ranomandry flakes no ampiasana amin'ny sambo mpanjono. Izy io dia afaka manao ranomasina ho lasa ranomandry masira mivantana.
Ny milina ranomandry misy ranomasina dia natao manokana ho an'ny fanaovana ranomandry amin'ny sambo fanjonoana. Izy ireo dia 100% manohitra ny lozisialy na ranomasina.
Ny mpamorona azy ireo dia tokony ho hendry mba hametahana azy araka izay azo atao mba hahafahany mifanentana amin'ny toerana voafetra ao anaty sambo manjono.
Ny haben'ny fahaizan'ny milina ranomandry flakes dia manomboka amin'ny 1T / andro ka hatramin'ny 20T / andro.
Fahaizana mamokatra ranomandry
Masinina ranomandry flakes 1T / andro
1 taonina isaky ny 24 ora
Masinina ranomandry flakes 3T / andro
3 taonina isaky ny 24 ora
Masinina ranomandry flakes 5T / andro
5 taonina isaky ny 24 ora
10 taonina isaky ny 24 ora
Masinina ranomandry flakes 20T / andro
20 taonina isaky ny 24 ora
Ireto ny tombony lehibe azo avy amin'ny milina fanidinako.
Namboarina manokana hiasa amin'ny toe-dranomasina.
Ny Compressor dia miaraka amina fitoeran-diloilo manokana, ary ny fivezivezena menaka compressor an'ny milina dia milamina amin'ny fihozongozongozona ao anaty sambo.
Ny condenser mangatsiaka amin'ny ranomasina dia vita amin'ny fantsom-by Alpaka, tendrony varahina, ary manohitra ny lozika tanteraka amin'ny ranomasina. Ny ranomasina mangatsiatsiaka sy maimaim-poana dia hampiasaina ho fitaovana mety amin'ny fanesorana ny hafanana amin'ny condenser.
Ny tendrony varahina dia mihidy amin'ny visy vy 316.
Ny faritra rehetra mifandray amin'ny rano / ranomandry dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 316. Ny rafitra iray manontolo dia 100% manohitra ny fiafaran'ny ranomasina / rivotra.
Ny mpamokatra ranomandry dia miaraka amin'ny lelan-dranomandry sy scraper ranomandry.
Ny lelan-dranomandry dia manapaka ny soson-dranomandry ho lasa flakes, ary avy eo ny escraner ice dia manala ireo flakes ranomandry avy amin'ny mpamokatra ranomandry.
Miara-miasa ny lelam-panala sy ny ranomandry ary ny esaky ny ranomandry dia hesorina 100% ary latsaka ao anaty efitrano misy ranomandry daholo.
Ny tontolon'ny fanaovana ranomandry Evaporator dia natao miaraka amin'ny tsipika Meridian sy Parallel.
Ny tsipika dia manatsara ny fahombiazan'ny fanaovana ranomandry, ary tena manampy amin'ny fijinjana ranomandry izy ireo. Avelany hanala ny ranomandry rehetra ny escran-ranomandry. Voajinja tsara daholo ny vongan-dranomandry rehetra.
Famolavolana tena marani-tsaina hamoronana ranomandry evaporator ranomasina. Io ekipan'ny ekipantsika io dia nahazo patanty nanomboka tamin'ny 2009.
Ny fahombiazan'ny fiasan'ny masinina misy ranomasina dia tsara kokoa noho ny milina sinoa hafa.
4. Kalitao tsara miaraka amin'ny antoka maharitra.
Ny 80% amin'ireo singa ao anaty masinin-dranomainty ireo dia marika malaza iraisam-pirenena. Ny ekipa mpanamboatra matihanina sy za-draharaha dia mampiasa ny singa tsara.
Manome antoka anao ny milina ranomandry flake tsara kalitao miaraka amin'ny fahombiazan'ny asa tsara indrindra.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny rafitra fampangatsiahana dia 20 taona. Raha lasa tsy ara-dalàna ao anaty 20 taona ny fahombiazan'ny rafitra fampangatsiahana dia handoa ny fatiantoka ataon'ny mpampiasa izahay.
5. Fotoana fanaterana haingana.
Tsy mila mihoatra ny 20 andro isika hanaovana milina ranomandry flake kely kokoa noho ny 20T / andro.
Tsy mila mihoatra ny 30 andro isika hanaovana milina ranomandry flake eo anelanelan'ny 20T / andro ka hatramin'ny 40T / andro.
Tsy hiandry ela ny mpanjifa vao hahazo ireo milina ranomandry flake aorian'ny fandoavana.